I-Mini Grid System, i-Mini Grid Power System, i-Mini Mini Grid System Inkcitho evela kwi-China
Inkcazo:Inkqubo yeGrid Mini,I-Mini Grid Power System,I-Mini Mini Grid System,Iinkqubo zeMandla eGrid,,
Inkqubo yeGrid Mini,I-Mini Grid Power System,I-Mini Mini Grid System,Iinkqubo zeMandla eGrid,,
Home > Imveliso > Inkqubo yasekhaya ye-solar / DC > Inkqubo yeGrid Mini
Iintlobo zeMveliso ze- Inkqubo yeGrid Mini , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Inkqubo yeGrid Mini , I-Mini Grid Power System ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Inkqubo yokukhanyisa i-Solar Generator System
Imveliso yindlela yokukhanyisa, ukuhlawula umkhiqizo wedijithali, ukuqhuba izixhobo zombane zamandla kagesi kwisinye sezixhobo zombane we-AC kunye ne-DC. Umrhumo ojongene nolawulo kunye nokulawulwa kokukhutshwa kubonakala ngokusebenzisa ibhodi...
Unokuba ukhathele ukusebenzisa izibane ze-kerosene ezinobungozi kunye namakhandlela kwiindawo ezingenawo umbane. 300 kwenkqubo. Ivumela ukuxinisa okukhulu, ukuphakama kwezinga eliphezulu kunye ne-ultra-high-capacity lithium ibhetri yeqela,...
Inkqubo yendlela yokuvelisa amandla yelanga-grid yindlela yokuveliswa kwamandla kwelanga yendalo eluhlaza eyenzelwe abasebenzisi bezorhwebo, abasebenzisi bokuhlala, amashishini namaziko. Amandla ayo agcina i-300W-50KW. Ingasebenzisa amandla elanga...
Le mveliso yinkqubo yamandla ephathekayo edibanisa iindlela ezininzi zokusebenza, ukugcinwa kwamandla alanga . Ingasetyenzwa ngaphakathi kwindlu okanye ngaphandle, kwaye ukutsalwa kwegesi kunye negridi yamandla kunokukhethwa ngokweendlela...
Ukunikezelwa kwamandla kagesi okuphuthumayo
Ukunikezelwa kwamandla angxamisekileyo angaphandle kwe-20W kunamathomo amabini okuhlaja: 1. Umgangatho ophezulu kunye nobomi obude 20W Ipaneli yelanga ihlawulwe ngebhetri ye-12V. 2. Ukuhlawula ibhetri ngokusebenzisa ishaja ekhethekileyo....
Inkqubo yokuvelisa amandla yelanga
Iipaneli zelanga zeso sizukulwana seSolar Power ezincinane zisepaneli eziphezulu eziphezulu, ezingasetyenziselwa kwiidolophana ezikude kunye neendawo zokuhlawulela emini. Imveliso ye-AC 9V yokukhanyisa kwe-LED kunye nezixhobo eziphathekayo ezifana...
I-Generator Solar Energy Generator Beka iPV Generator
Packaging: Amandla okuphendula iimfuno zabaxhasi
Ukufumana ubomi obutsha bokuveliswa kwamandla elanga, ukudala umhlaba omtsha ococekileyo kunye nobume, kunye nokuvelisa umbane ngokukhanya. Isethi yezixhobo . Ukusetyenziswa kwintaba engekho zombane, ukunyanga kwezilwanyana, ukuveliswa kwamandla...
Umzi ongekho igridi yokuLawula i-Solar Control Machine Integrated
Uhlobo oluhlaza kunye noluntu, ukuveliswa kwamandla e-photovoltaic, ukugcina amandla nokugcina amandla, umgangatho ophezulu, ukusebenza kakuhle kunye nobomi obude. Sebenzisa ityala lamandla onke, imeko ephezulu yokusebenza kakuhle, amathuba...
Umthombo weMandla oMbane oPhezulu oPhezulu
Ezi zenzi-mafutha ezisebenzayo zelanga ziyi-solar power port ehambisa i-panorama, iibhetri ze-lithium, i-inverter kunye nolawulo lwesiphaluka. Abasebenzisi akudingeki ukuba bafake iipaneli zelanga zodwa ukunciphisa umthwalo kubasebenzisi. Ngethuba...
Inkqubo yelanga inemisebenzi emithandathu yokukhusela, kubandakanywa ukushisa, ukugqithisa umthwalo, ukukhusela ngamandla, ukukhuselwa kwamandla aphantsi, ukukhusela ukukhuselwa kunye nokukhuselwa kwexesha elifutshane. Iyakwazi ukuphepha izingozi...
Izinto ezisetyenziselwa ulangatye zisebenzise ngokhuseleko oluphezulu. Ubuncinci obukhulu, ukukhanya okulula, ukusetyenziswa kwamandla aphantsi, i- Portable Solar Powered Mobile Power Supply , iipaneli zelanga, iibhetri ze-lithium, i-inverter,...
Packaging: Ukudibana neemfuno zabathengi
Ukwenza umgangatho ophezulu wendlela yokusebenza yelanga, ubomi benkonzo bufikelela kwiminyaka eyi-25. UThixo ujikeleza ibhetri ye-colloidal, iphakamisa inkqubo yokuphila kwenkonzo. Inkqubo yokuveliswa kwamandla Iipaneli zelanga zengeniso...
Packaging: Unokuhlangabezana neemfuno zamakhasimende
Le yindlela ekhuselekileyo, isetyenzisiwe kunye nesobugcisa be-off-grid system. Inemisebenzi yokukhusela okuphezulu kunye nephantsi, ukukhuseleka ngokugqithiseleyo, ukukhusela okukhuselekileyo, ukubonakaliswa kwesikrini, ukunikezwa kwamandla kunye...
Min. Myalelo: 1 Set/Sets
Amandla elanga apheliyo, kwaye amandla aqhaqhaqhaqhayo afumaneka emhlabeni angakwazi ukuhlangabezana nezihlandlo ezili-10 zamandla omhlaba jikelele. Ngethuba nje iinkqubo ze-photovoltaic zelanga zifakwe kuma-4 eepesenti zeentlango zehlabathi, umbane...
Isikhululo soMbane saseSolar Photovoltaic sisisitye esitshintsha amandla ombane kwisiganeko sombane ngokusebenzisa isunyuli yeselula yelanga. Yimandla ecocekileyo nevuselelekileyo yomhlaba. Inkqubo yesikhululo samandla esilawuli se-photovoltaic...
Inkqubo yendlela yokuvelisa amandla yelanga i-solar crystalline i-solicon solar panel eyenziwe ngamaseli asebenzayo alanga. Ukuhambisa amandla elanga. Inkqubo ye-Off-grid. Ibhetri ihlawulwa phantsi kwelanga, kwaye ngoku ngoku i-bhatri ngqo...
I-Solar Off-grid System yindlela entsha yomkhiqizo wamandla aluhlaza. Ukuthelekiswa nemveliso yesiqhelo, ine-index ephezulu yezobugcisa, isilinganiso somlinganiselo ophezulu wokusebenza, iindleko eziphantsi, ukusebenza kakuhle, amandla aphakamileyo...
I-Solar Power Generation System
Iphaneli yeSolar iyisisithi esithatha ilanga kwaye ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo iguqula imisebe yombane ibe yombane wamandla ngokusebenzisa umbane wesithombe okanye umphumo we-photochemical. Inkqubo yendlu yezixhobo zelanga ukufaka...
I-Solar Rooftop Power Generation System
Ukusebenza ngokugqwesileyo ngenxa ye-CPU yokulawula i-teknoloji yolawulo oluphambili. Uluhlu olubanzi lwemithwalo efanelekileyo ngenxa ye-wave sine wave output ACUkusebenza kwindlela yokuhambisa / indlela yokugcina amandla / imo yebhethri...
Igalelo legalelo elidibeneyo nenkqubo yokuvelisa amandla yelanga
Inkqubo yokuvelisa amandla yelanga ye-Grid yindlela entsha yenkqubo yamandla okuveliswa kwamandla anokufumana amathuba okuphuhlisa. Kulandela umgaqo wokuguqula imeko, ukuhlambulula nokusebenza kakuhle, ukusasaza nokusebenzisa iindawo ezikufuphi,...
KwiChina Inkqubo yeGrid Mini Abaxhasi
Ukusasazwa kwesitishi samandla e- photovoltaic , isistim yokuvelisa amandla kwipaneli yelanga isekelwe kumgaqo we- photovoltaic . Yindlela yokuvelisa amandla okuguqula ngokuthe ngqo amandla okukhanya kwelanga ibe ngamandla kagesi. Inkqubo yendlela yokuvelisa amandla yelanga-gridi ishukumisa amandla elanga ngamandla ombane ngaphandle kokudlula amandla okugcina ibhetri, kwaye ithumela umbane ogqithisiweyo emva kokudibana nomthwalo wemithwalo okanye xa kungabikho mthwalo kwi gridi edibeneyo inverter. Amandla okuvelisa amancinci. Ukungcola okuphantsi kunye nokusebenza kakuhle; Kwinqanaba elithile, liyakunciphisa uxinzelelo lombane wendawo. Ukucoca amandla, ukukhutshwa kwamanzi; Akukho sandi, akukho mpembelelo kwimo yemoya yentsapho; Kukhona umphumo othile wokumisa umthunzi. Ukufakwa okulula kunye nokuhamba; Utyalo-lunye lwexesha-mali, inzuzo yexesha elide; Ukunyaniseka okuphezulu, ubomi obude, kunokuqhuba ngaphezulu kweminyaka engama-25. Ukusetyenziswa kwizindlu zokuhlala, igumbi lokukhanya kwelanga, ukupaka kwegalaji phezulu kwelanga, izakhiwo zezolimo kunye nezoshishino ziphazamise ukukhanya kwelanga. Luhlobo olutsha lokuveliswa kwamandla kunye negunya lokusetyenziswa ngokubanzi kunye nethuba lophuhliso olubanzi. Ikhuthaza umgaqo wesiseko esikufutshane, uxhulumano olusondeleyo kwigridi, ukuguqulwa okufutshane kunye nokusetyenziswa okukufutshane, okungekho kuphela ukuphucula ngokuphumelelayo amandla okuvelisa isiteshini samandla e- photovoltaic ngobukhulu obufanayo, kodwa nangokusombulula ngempumelelo ingxaki yokulahlekelwa ngamandla i-booster kunye nokuhamba ngokude.
I-Mini Grid Power System
I-Mini Mini Grid System